Erdogan oo Muqdisho ka degay
19 Aug 19, 2011 - 7:44:09 AM
Ra'iisal Wasaaraha Turkiga, Recep Tayyib Erdogan, ayaa ka degey caasimadda Soomaaliya, Muqdisho, si uu u muujiyo baahida loo qabo in kordhiyo gurmadka dadka ay abaaruhu waxyeeleen.
Badiyaa ma dhacdo in Hoggaamiye caalami ahi uu booqdo Muqdisho, oo ay burburiyeen dagaallo ka socday in ka badan 20 sano.
Ra'iisal Wasaaraha waxaa wehliya xaaskiisa, gabadhiisa iyo qaar badan oo ka mid ah xubnaha ay ku wada jiraan golaha Wasiirrada.
Inyar ka dib markii uu Muqdisho ka degey, wuxuu Ra'iisal Wasaaruhu soo booqday xearada Badbaado 2, oo ay ku jiraan dad ku soo barakacay Muqdisho.
Toddobaadkan horraantiisii ayuu Guddoomiyay shir dalalka Islaamka oo ugu deeqay Soomaaliya saddax-boqol-iyo-konton milyan oo doollar.
Madaxweynaha Djibouti, Simaaciil Cumar Geelle, ayaa isaguna booqday Muqdisho toddobaadkan horraantiisii.
Qaramada Midoobay waxay ku qiyaastay in 12 milyan oo ruux ay ku gaajoonayaan abaarta Afrikada Bari.